जोगीको भेषमा पक्राउ परे किस्ट बैंकका फरार पूर्वसीईओ ज्ञवाली ! — Newskoseli
जोगीको भेषमा पक्राउ परे किस्ट बैंकका फरार पूर्वसीईओ ज्ञवाली !
एक समयका सेलेब्रिटी बैंकर थिए कमल ज्ञवाली । ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक (किस्ट बैंक) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीर्इओ) रहेका उनी टप बैंकरमा गनिन्थे ।
सामान्य शिक्षकबाट केही वर्षमै वाणिज्य बैंकको सीर्इओ बनेका उनको सफलता अस्वाभाविक लाग्ने खालको थियो । तर, सफलता लामो समय टिक्न सकेन । बैंकमा भएको कीर्ते कामको अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै ५ वर्षअघि उनी फरार भए । उनको संलग्नतामा बैंकमा करोडौं घोटाला भएको खुल्दै गयो ।
यसरी भेटिए जोगीको भेषमा…
ज्ञवाली फरार भएलगत्तै प्रहरी उनको पछि लागेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआर्इबी) को टोली निरन्तर उनको खोजीमा थियो । तर, कुनै ‘क्लु’ पाउन सकेको थिएन । लामो समय प्रहरीलाई छक्याउन सफल भएका ज्ञवाली बिहीबार भारतको उत्तर प्रदेशको मथुरानजिकै वृन्दावनको आश्रममा भेटिए, त्यो पनि जोगीको आवरणमा ।
प्रहरीलाई झुक्याउन ज्ञवालीले जोगीको भेष धारण गरेका थिए । ‘त्यहाँ पूरै जोगीका रूपमा उनको पहिचान थियो,’ पक्राउ गर्न गएका अपराध महाशाखाका एक अधिकारीले भने– ‘प्रहरीलाई छक्याउन नै उनले यस्तो हुलिया बनाएको हुनुपर्छ ।’ उनी अन्य जोगीहरूसँगै बसिरहेका थिए । लामो टुप्पी पालेका उनलाई ठम्याउन सुरुमा त प्रहरीलाई गाह्रो भयो ।
तर, सम्पूर्ण सूचना लिएर भारतीय प्रहरीसँगको समन्वयमा त्यहाँ पुगेको महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरी छाड्यो । शुक्रबार नेपाल ल्याइएपछि प्रहरीले अदालतमा पेस गर्‍यो । अदालतको आदेशपछि उनलाई कैद भुक्तान गर्न जेल चलान गरिएको खबर नवराज मैनालीको बाइलाइनमा शनिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।